Super Green Pass: sharciyo cusub ayaa dhaqan galaya laga bilaabo 6 Disembar 2021 ilaa 15 Janaayo 2022 | JumaMap
Farqiga u dhexeeya dhammaan hawlaha ay qaban karaan kuwa haysta Baasaabka Cagaaran ee aasaasiga ah iyo kuwa haysta Super Green Pass
Wararka isticmaalka gaadiidka dadweynaha iyo dhaqdhaqaaqa bulshada
Xeerarka goobta shaqada iyo isticmaalka maaskaro
Muddada ansaxinta iyo wax badan oo ka badan oo ku jira maqaalkan qotodheer ee Adeegyada Khariidadaha Juma ee Qaxootiga:
Super Green Pass: xeerar cusub laga bilaabo 6 Diseembar 2021
Xeerar cusub ayaa dhaqan galaya laga bilaabo Diisambar 6, 2021 ilaa Janaayo 15, 2022:
Kaasaska cagaaran ee la xoojiyey (loo yaqaan Super Green Pass): Yaa heli kara?
kuwa dhammaystay wareegga tallaalka • kuwa ka soo kabsaday Covid-19
Kaasaska cagaaran ee aasaasiga ah: yaa heli kara?
kuwa lagu sameeyo tamboonka caadiga ah
Ansaxinta Kaasaska Cagaaran ee Super iyo Kaasaska Cagaaran ee aasaasiga ah
Pass Super Green wuxuu shaqayn doonaa sagaal bilood laga bilaabo maamulka ugu dambeeya ee tallaalka ama shahaadada daawaynta. Kaasaska cagaaran ee aasaasiga ah wuxuu shaqayn doonaa 72 saacadood haddii lagu sii daayo bakhti-kooxeed taban, 48 saacadood haddii lagu sii daayo baffer antigenic taban.
Wararka ku saabsan gaadiidka dadweynaha
Si aad u raacdo tareenada xawaaraha sare leh iyo diyaaradaha, gaadiidka tareenada ee gobolka (Tareennada isku dhafka ah iyo kuwa rakaabka ah), waa qasab in la muujiyo ugu yaraan hal suuf oo leh natiijooyin taban oo la sameeyay 48 saacadood ee hore. Cusub: bakhaar qasab ah sidoo kale gaadiidka dadweynaha ee deegaanka ( basaska, tababarayaasha iyo tareenada dhulka hoostiisa mara), kuwaas oo hubinta sidoo kale u dhici doonto si aan kala sooc lahayn. Kuwa haysta Super Green Pass waxay awoodi doonaan inay si joogto ah u safraan.
Maaskaro gudaha ah
Waa qasab qof walba meel walba oo uu joogo
Waa qasab in aagga jaalaha, oranji iyo casaanka! Dhinac walba waa qasab in lagu sido.
Sida ay shaqada uga shaqeyso
Si aad shaqada u aaddo, kaliya tus baasaska cagaaran ee aasaasiga ah ka dibna mareen suufka molecular (wuxuu shaqeynayaa 72 saacadood) ama antigenic (wuxuu shaqeynayaa 48 saacadood). Si aad u gasho maqaaxiyaha, si kastaba ha ahaatee, waxa ay noqon doontaa qasab in la haysto kaarka cagaaran ee Super.
Kaas oo jeegag iyo ganaaxyo ku sameeya goobta shaqada
Xakamaynta goobta shaqada ayaa ah mid aan isbedelin. Loo-shaqeeyayaasha ayaa mas’uul ka noqon doona xaqiijinta lahaanshaha shaqaalaha ee Green Pass aasaasiga ah. Jeegaggu waa in la door bidaa in lagu sameeyo albaabka laga soo galo waxaana sidoo kale lagu samayn karaa muunad. Kuwa aan ixtiraamin sharciyada waxay halis ugu jiraan ganaaxyo u dhexeeya 600 ilaa 1,500 euro. Kuwa aan xakameynin waxay halis u yihiin 400 ilaa 1,000 euro.
Baararka, maqaayadaha iyo meelaha lagu caweeyo waa ka mamnuuc kuwa aan haysan Super Green Pass
Xitaa haddii aagga cad, dadka aan la tallaalin ma awoodi doonaan inay galaan baararka, makhaayadaha gudaha, xafladaha, discos, xafladaha dadweynaha, mana awoodi doonaan inay ka qaybgalaan ciyaaraha isboortiga ee garoomada iyo fagaarayaasha. Taa beddelkeeda, waxay awoodi doonaan inay tagaan barkadaha dabaasha iyo jimicsiga oo muujinaya natiijada suufka xun. Fiiro gaar ah: Aagga cas xaddidaadaha hadda jira ee kuwa aan la tallaalin waxay sidoo kale waxtar u yeelan doonaan kuwa leh Super Green Pass.
Qalabka barafka lagu ciyaaro: xeerar cusub
Aagga caddaanka iyo jaalaha ah waxa kale oo suurtagal noqon doonta in lagu baraf barafka cagaaran ee aasaasiga ah halka aagga liimiga ah aad geli karto wiishashka kaliya haddii aad leedahay Super Green Pass. Aagga cas ee wiishyada barafka waa loo xiri doonaa qof walba.
1,178 Visite totali, 4 visite odierne
978 Visite totali, 4 visite odierne
799 Visite totali, 2 visite odierne